Mihiaka Ny Vahoakan’i Iran: Lahatsary Maro Amin’ny Fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Mihiaka Ny Vahoakan'i Iran: Lahatsary Maro Amin'ny Fihetsiketsehana
Voadika ny 04 Janoary 2018 16:36 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, русский, Ελληνικά, Español, English
Mpanao hetsi-panoherana manongana ny fiaran'ny mpitandro filaminana ao amin'ny araben'i Valijra ao Teheran. [Sary nalaina avy amin'ny mpaka lahatsary nalaina tany Iran ary nozarain'ny Voice of America]
Ny taonjato farany dia nahitàna ohatra tsy tambo isaina momba ny tolona sy fanaovana sorona ny ain'ny olon-tsotra Iraniana, miady amin'ny zava-drehetra manomboka tamin'ny fanomezana ny indostrian'ny solika hotantanin'ny fanjakana, mandalo ny fahafahan'ny vehivavy mifidy mandrotsa-bato, ary ny fanonganana fitondram-panjaka. Na izany aza, nogejaina, na niaraha-niasa, na nomena marika vaovao hatrany ireo tolona mahery fo ireo mba ampifanarahana amin'ny fomba firesaka na fomba fitantarana manokana. Ohatra tsotra ny fahasamihafana mahavariana eo amin'ny hery laika, ny radikaly ary ny feminista tafiditra tamin'ny revolisiona taona 1979 tao Iran, izay nohamaizinina tamin'ny sary maharitra hatramin'izao ny hetsika ho nakan'ny mullah mpandala ny nentin-drazanany fifehezana.
Maro ireo zava-mifaningotringotra soritan'ny onjam-pihetsiketsehana vaovao ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, izay nofaritan'ireo sasany lazaina fa “manam-pahaizana momba an'i Iran” tamin'ny fomba tsotra ho ohatra amin'ny fihetsika sy ny fitiavan'ny olo-tsotra ho ampiasaina hanohanana tombontsoa ara-politika manokana. Tafiditra ao anatin'izany ny fitomboan'ny fahasorenana tamin'ny kolikoly sy ny fampidirana ny Mpiambina ny Revolisionera Islamika (IRGC), sampan'ny tafika Iraniana niorina taorian'ny revolisiona 1979, tao amin'ny toekarena. Ilaina ihany koa ny mahatakatra ny disadisa ara-politika manimba ny fitondrana, sy ny faneriterena nisy efa hatramin'ny ela sy ny fifanoheran-javatra izay nahatonga ity fipoahana ity.
Na izany aza, anoloantsika amin'ny endriny madio indrindra ny tena zava-misy ao Iran, tsy mila fanazavana amin'ny alalan'ny lahateny. Ireo hetsi-panoherana ireo dia momba ny fahalalahana, ny fotoana mety [opportunité] ary ny demaokrasia- samy idealy sy manazava tenany izy ireo.
Mba hamelàna ny olon'i Iran hifampiresaka, nanandrana nanasongadina sary, teny filamatra sy fihetsika misongadina vitsivitsy, izay manome topi-maso ny zava-mitranga ao Iran amin'izao fotoana izao aho. Avelako ho an'ny mpamaky ny fanatsoahana fehin-teny manokana.
Nahoana ny olona no manao hetsi-panoherana
Fanehoan-kevitra mahaliana roa tao amin'ny reddit ato sy ato
Ao anatin'ny lahatsary etsy ambany, mitantara ny zava-misy ao amin'ny Oniversiten'i Teheran ny tovovavy iray satria tonga tao amin'ny tobin'ny oniversite ny IRGC sy ny ny mpitandro filaminana, nilaza ity tovovavy ity fa mpianatra maro no voadaroka ary nosamborina sy nalaina ny sasany. Na dia teo aza ny fanafihana ara-batana, nanamarika izy fa “… nikiry nijoro ireo mpianatra ary nanohy nihiaka ny teny filamatr'izy ireo.”
Tamin'ny lahatsary iray hafa avy aoTeheran (jereo eo ambany), mihiaka hoe “fahafatesana ho an'ireo mpanao didy jadona” ny mpanao fihetsiketsehana no sady miady amin'ny etona mandatsa-dranomaso.
Ao anatin'ny lahatsary eto ambany, maka horonantsary ny lehilahy iray ao Behshar ary miresaka ny ataon'ny polisy amin'ireo olom-pirenena Iraniana. Mitantara ny fisamborana mahery vaika sy ny fidarohana ireo mpanao fihetsiketsehana tsy mitondra fitaovam-piadiana ity lehilahy ity. “Jereo izay ataon'izy ireo amin'ny olona ato amin'ity fiarahamonina ity. Jereo, jereo. Nanafintohina azy tamin'ny tsinontsinona izy ireo. “Raha mbola nanohy naka horonantsary izy, nanomboka nihiaka ny olona ao amin'ny vahoaka hoe” avelao izy handeha”, raha ny hafa kosa nanomboka nanatona ny polisy. Mifarana ny lahatsary amin'ny filazan'ity lehilahy ity hoe, “Anjaran'ny olon-tsotra ankehitriny no miady.”
Ao Kashan, mihirahira ny mpanao fihetsiketsehana hoe “Fahaleovantena, Fahalalahana ary Repoblika Iraniana”, fanavaozana ny hira miverimberina tamin'ny revolisiona 1979 hoe “Fahaleovantena, Fahalalahana ary Repoblika Islamika.”
Eto ambany, vahoaka marobe no mivorivory ao Shiraz mihiakiaka amin'ireo olom-pirenena namana mba hanatevin-daharana ny fihetsiketsehan'izy ireo.
Mahaliana ny manamarika fa raha nilaza ny sasany fa ampahany amin'ny hetsika mitady fanavaozana tarihan'ilay Filoha lazaina ho tony fihetsika antsoina hoe Hassan Rouhani ny hetsi-panoherana any Iran, dia toa mamakivaky ny ady anatiny eo amin'ireo antoko ny hetsi-panoherana amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ity lahatsary avy any Hamadan ity, heno mihiaka ny mpanao fihetsiketsehana hoe, “manana fahamenarana ny mpitondra fivavahana, afaho ny fiarahamonintsika”, arahin'ny “Fahafatesana ho an'i Rouhani!”, maneho ny tsy fankasitrahana ny rafi-pitondran'ny mpitondra fivavahana sy ny Repoblika Islamika amin'ny ankapobeny.
Ao anatin'ity lahatsary ity, lehilahy iray no re milaza hoe, “ity no fihetsiketsehana ahitana olona 50.000 ao Ahvaz”.
Ny horonantsary manaraka eto ambany dia mampiseho lehilahy mitoraka vato amin'ny mpitandro ny filaminana ao Ahvaz no sady mihiaka hoe “Fahafatesana ho an'i Khamanei!” – teny izay mety hitondra sazy ho faty any Iran.
Ny lahatsary eto ambany avy amin'i Mashad koa dia mampiseho afo mirehitra, sy kiakiakam-bahoaka toa milaza fifandonana amin'ny mpitandro filaminana.
Tao Lorestan, hita mitarika olona feno rà ao anatin'ny vahoaka ireo mpanao hetsi-panoherana no sady mihiaka hoe “hovonoiko izay namono ny rahalahiko” sy “Fahafatesana ho an'i Khamanei!”
Tamin'ny sarimihetsika iray navoakan'i Bandar Abbas,nodoran'ny mpanao hetsi-panoherana ny takelaby lehibe misy ny sarin'ny Mpitarika Fara-tampony Khamanei. Hetsika fahatezerana sy fanoherana izay mihoatra ny vidin'ny atody na ny faniriana fanavaozana ara-politika.
Amin'ny lahatsary avy any Mashhad eto ambany, toa navadika sy nodoran'ny mpanao fihetsiketsehana ny fiaran'ny polisy.
Tao Zanjan indray, mihodidina an'ireo mpitandro ny filaminana mandositra ny mpanao fihetsiketsehana ary mitoraka azy ireo amin'ny zavatra satria miezaka mandositra izy ireo.
Ao Kermanshah, hita mandositra an'ireo mpanao fihetsiktezitra tezitra marobe ny vondrona mpitandro ny filaminana.
Tao Rasht, nanao sit-in milamina teo anoloan'ny mpitandro ny filaminana tonga miaraka amin'ny môtô ny vahoaka. Mihirahira ireo mpanao fihetsiketsehana hoe, “Ho faty izahay, ho faty izahay, ho alainay indray i Iran”.
Aseho ao anatin'ity lahatsary voalaza fa nalaina tao anaty fiarakaretsaka ao Teheran ity ny endrika (bitika) ny fiarahamonina Iraniana. Eny an-dalana, mahita ireo mpitandro ny filaminana midaroka mpanao fihetsiketsehana ny mpandeha, mpandeha vehivavy iray manamarika fa tsy faly ny olona ary mitabataba manontany amin'ny mpitandro filaminana hoe nahoana izy ireo no midaroka mpanao fihetsiketsehana. Nilaza taminy tsy hikorapaka sy tsy hiresaka intsony ny mpamily, izay toa voahelingelin'ny tabatabany, raha tsy izany avoakany hiala ao anaty fiara izy. Nangataka mba hivoaka ilay mpandeha vehivavy feno fihantsiana. Rehefa mamoaka azy ny mpamily dia nimonomonona fa tsy tiany ho simba ny fiarany, satria marobe ny fifandonana hitantsika amin'ny alalan'ny fitaratra eo anoloanan'ny fiarakaretsaka.
Mazava fa ao anatin'ity tolona ity, misy ireo tsy maniry intsony ny hitazatazana fotsiny mahita ny tsy rariny. Tokony hihaino ny tenin'izy ireo isika ary mandray ny hetsik'izy ireo amin'ny maha-izy azy—ny fihaikana feno herim-po ao amin'ny firenena iray vonona amin'ny fiovàna.